Barnaamijka Muuqaalka Bulshada, Sidee Boosaso oo ay Cimiladeedu kulushahay loo dhireynkaraa? (dhegayso) – Radio Daljir
Barnaamijka Muuqaalka Bulshada, Sidee Boosaso oo ay Cimiladeedu kulushahay loo dhireynkaraa? (dhegayso)
Oktoobar 19, 2021 11:11 b 0
MUUQAALKA BULSHADA & FAADUMO DEGAN DAAHIR DALJIR BOOSAASO | Maanta waxa uu ku saabsan yahay. Sidee loo dhireyn karaa magaalada Boosaaso oo cimiladeedu ay aad u kulushahay?
Maqaalo Kale 440 Wararka 27053
Dowladda oo ka hadashay kaluumaysiga sharcidarada ah ee xeebaha Soomaaliya